December 2011 – Kyaw Kyaw Oo's Thoughts, Love and Hope
Posted on December 23, 2011 July 14, 2012 by kyawkyawoo
Duaa for relatives or friends who have passed away. Can the dead hear us? We read Al Quran, Sura Yasin,… Read more Shall we pray (Dua) for the dead ?
Posted on December 21, 2011 July 14, 2012 by kyawkyawoo
Posted on December 6, 2011 July 14, 2012 by kyawkyawoo
By Imam Al Ghazali from his famous book “Ihya ul uloom id deen” “SAY TO MY FRIENDS when they look… Read more THE GLORIOUS HEREAFTER
Posted on December 1, 2011 July 14, 2012 by kyawkyawoo
Source : မွတ်စလင် သတင်းစဉ် မောင်လာနာ ၀ဟီဒွတ်ဒီးန်ခန်းနှင့် အင်တာဗျူး နယူးဒေလီက မောင်လာနာ ၀ဟီဒွတ်ဒိန်းခန်းဟာ ထင်ပေါ်ကျော်ကြားလုသိများတဲ့ အစ္စလာမ့်ရေးရာပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ အိန္ဒိယ မွတ်စလင်များရဲ ဘာာရေး လူမှုရေး ၊ ပညာေ၇း အကြောင်း စာအုပ်ဆောင်းပါးများစွာ… Read more အွမ္မသ်ညီညွတ်ရေး အခန်းကဏ္ဍ